Semalt ရဲ့အပ်နှံမှု SEO ဆိုသည်မှာ Dashboard ကို၏ 10 အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
Semalt ၏အပ်နှံထားသော SEO Dashboard ၏အဓိကအချက် ၁၀ ချက်
Semalt ၏နောက်ဆုံးထုတ် Dedicated SEO Dashboard သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူအမြောက်အများကိုအကျိုးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီများ၊ အလွတ်များ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ - နေ့စဉ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသတင်းပေးပို့ရန်နှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များအားသူတို့၏ SEO နှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကြားရန် DSD ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ယနေ့တွင်၎င်းသည်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ DSD က link တည်ဆောက်ခြင်း၊ content ဖန်တီးခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာတို့ကဲ့သို့သောအဓိကလုပ်ဆောင်မှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်မက်ထရစ်များမည်သို့ထုတ်လုပ်မည်၊ အခြားအရာအားလုံးကို Semalt မှအဖြူရောင်တံဆိပ်ကပ်သည့် SEO Dashboard ကိုရည်ညွှန်းသည်။
Dedicated SEO Dashboard အကြောင်းများစွာပြောခဲ့သည်။ သို့သော် Ahrefs, SEMrush နှင့် UberSuggest ကဲ့သို့သောကိရိယာများမှခွဲခြားထားသည့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများကားအဘယ်နည်း။
Semalt ၏ DSD သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ထိပ်တန်းအင်္ဂါရပ်များကဘာတွေလဲ။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီစာရင်းမှာတွေ့ရအောင်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ထိပ်တန်းအင်္ဂါရပ် ၁၀ ခုအကြောင်းပြောပါမည်။
Semalt ရဲ့ DSD ၏ 10 တွန်းလှန်အင်္ဂါရပ်များ
Semalt ၏ DSD သည်မှော်အတတ်ကိုထူးခြားသည့်နည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်အခြားမည်သည့်ကိရိယာတွင်မရရှိနိုင်သည့်ထိုအင်္ဂါရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးလုပ်ငန်းအတွက် DSD အပေါ်မှီခိုလိုမလိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Semalt ၏ DSD သည်သင်၏ Domain တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်
Semalt's Dedicated SEO Dashboard ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုသင်၏ရှိပြီးသားဒိုမိန်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဥပမာ - ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ semalt.com ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါတို့၏ DSD ၏သရုပ်ပြတစ်ခုမှာမှာတည်ရှိသည် demo.semalt.com။
ပုံ ၁ - DSD Demo သည် SEMALT ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖြစ်သည်
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွင်အပိုကုန်ကျစရာမလိုပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းပေါ်တွင်ထိုင်ခြင်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားစစ်မှန်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သူတို့ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးရန်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းသို့သွားစရာမလိုဘဲရေရှည်တွင်သင့်၌သူတို့ ပို၍ ယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများကိုတိုးပွားစေသည်။ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ခလုတ်ထဲမှာ link ကိုထည့်ပြီးသူတို့လိုချင်သည့်အချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၂။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်အဆင့်မြင့် Analytics
သင်၏ဂလိုင်းများကိုဂူဂဲလ် Analytics (သို့) Adobe Analytics စာမျက်နှာသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင်ငြီးငွေ့ပါသလား။
မင်းမှာမင်းရှိလားလို့မင်းကိုမေးဖူးလား စီးပွားဖြစ်အစီအစဉ် ပိုအဆင့်မြင့်ပြီးအဆင်မပြေတာ၊ junk analytics ကိုမတင်ပြတာလား။
သူတို့အပိုဆပ်ဖို့အဆင်သင့်သောထိုကဲ့သို့သော tool ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသခဲ့ကြပြီလော
ယခုတွင်သင်သည်သင်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်များရှာဖွေနေသည့်မှန်ကန်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုပြသသည့်မြှုပ်နှံထားသည့်အဆင့်မြင့်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုကိရိယာတစ်ခုပါ ၀ င်သည့် Semalt's DSD သို့ပြောင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ Google SERP အချက်အလက်မှထိပ်တန်းစာမျက်နှာများအထိထိပ်တန်းသော့ချက်စာလုံးများအထိ Semalt ၏ DSD တွင်သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာနှင့်အခြားအရာများမှသင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်။
3. Plagiarism စစ်ဆေးပါ
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မည်မျှအရေးပါသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ပိုမို၍ အလေးအနက်မပြောနိုင်ပါ။ အေဂျင်စီများနှင့်အလွတ်များနှင့် Bigwig ကော်ပိုရေးရှင်းများပင်အကြောင်းအရာကိုနောက်ဆုံးထားလိုက်သည်။ သူတို့ကစာရေးဆရာအမြောက်အများကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်သာမန်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းကသူတို့ကိုရလဒ်ကောင်းများဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟုသူတို့ခံစားရသည်။ ဒါမမှန်ဘူး။
ထို့အပြင်အကာအကွယ်ပေးသည့်အနေဖြင့်သင်၏ပြင်ပအကြောင်းအရာများ၏ထူးခြားမှုကိုသင်အမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။ Copyscape နှင့် Grammarly ကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်စျေးကြီးလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုမရှိသော်လည်း Semalt's DSD ၏ built-in plagiarism checker ကို သုံး၍ သင်၏အကြောင်းအရာမည်မျှထူးခြားသည်ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။
၄။ Semalt Reseller အစီအစဉ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် Semalt သုံးစွဲသူဖြစ်လျှင် DSD ကမ်းလှမ်းချက်သည်သင့်အတွက်ထပ်မံအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ Semalt ၏ SEO ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မည်မျှထိရောက်မှုရှိကြောင်းသင်၌ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိပြီးသား ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်သို့ရောင်းချရန်စီမံထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် DSD ပရိုဂရမ်ကိုသင်၏လက်ရှိ ဦး ဆောင်သူများအဖြစ်တိုးချဲ့ပြီးပိုမိုဝင်ငွေရနိုင်သည်။
Semalt ၏ DSD သည် Reseller Program နှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးသင့်ဖောက်သည်များအား A-to-Z SEO နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထုပ်တစ်ခုပေးသည်။
၎င်းသည် Semalt's DSD ၏ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုနှင့်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းသည်သင်၏ကိရိယာများကိုသင် tool ကိုလုံးလုံးလျားလျားထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုပြောပြရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနှင့်သူ၏နေရာချထားမှုကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်သည်ကိုမငြင်းနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ပို့လိုက်တဲ့ PPT နဲ့ Word ဖိုင်တွေမှာဒါကိုသင်ဘာကြောင့်ပေါင်းထည့်တာလဲ။ မရှိတော့ပါ။ ၎င်းကို Semalt's DSD tool ထဲသို့တင်ပါ။ သင်၏ client များ ၀ င်ရောက်လိုသောသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် dashboard ရှိလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာ Semalt's DSD ပေးသည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်အခါသင့်အားထောက်ပံ့ပေးသော admin panel တွင် - သင်သည် dashboard ၏ဆက်တင်များအားလုံးကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်၊ အသင်းဝင်အသစ်များကိုထည့်သွင်းပြီးသင်၏အဖွဲ့အတွင်းအခွင့်အရေးများပေးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏ Dedicated SEO Dashboard အတွက် master dashboard အဖြစ်စဉ်းစားပါ။
၇။ ဘာသာစကားပေါင်း ၁၅ မျိုး
Semalt's DSD ၏နောက်ထပ်မီးမောင်းထိုးပြချက်တစ်ခုမှာသင်ပေးသောဘာသာစကား ၁၅ ခုအနက်မှမည်သည့်ဒိုင်ခွက်ကိုမဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဂျာမန်၊ ရုရှား၊ ဒတ်ခ်ျနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအများစုသည်တိကျသောဘာသာစကားနှင့်ပြောဆိုခြင်း၊ အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အဆင်ပြေလျှင်၎င်းသည်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်ဟာအီတလီမြို့တော်ထဲကအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလား။ သင်၏ dashboard ၏မူလဘာသာစကားကိုအီတလီလိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အင်္ဂလိပ်စာကိုနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူအနည်းငယ်ရှိပါက၊ ၎င်းတို့ကိုအမြဲရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့ဒီ dashboard ကိုဥပမာပေးကြည့်ပါ။ သင်၏ဖောက်သည်များရွေးချယ်နိုင်သောဘာသာစကားများစာရင်းတစ်ခုရှိသည်။ ဘယ်လိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်လဲ
ပုံ ၂ - ဘာသာစကားရွေးချယ်သူတစ် ဦး ၏အမှန်တကယ် DSD တွင်ချထားခြင်း
Lighthouse မှတစ်ဆင့် Google ၏စာမျက်နှာအမြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်မှီခိုစရာမလိုတော့ပါ။ Semalt ၏ DSD ကိုသာ သုံး၍ သင်၏စာမျက်နှာများကိုပုံမှန်စစ်ဆေးရန်နှင့် dashboard သည်သင့်အားသင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်သုတေသနပြုလုပ်ရန်မရင်းနှီးသေးသောသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Semalt's DSD သည်သင်စဉ်းစားရန်ရှာဖွေသည့်ထိပ်တန်းပြိုင်ဘက် ၁၀၀ ကိုပြသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းကိုမည်သို့တိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုကောင်းစွာထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။
အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုတွင်သင်၏ပြိုင်ဘက်များမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် SEO နည်းဗျူဟာကိုလွှမ်းမိုးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏အမှုသည်အတွက်တစ်ခုခုအလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်အကျိုးမရှိဟုယူဆစရာအကြောင်းမရှိပါ။ သင်တို့အတွက်အံ့ဖွယ်အမှုတွေတောင်မှလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်သူသိလဲ။ !
၁၀။ Real-Time Update Frequency
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ USP ၏အဖြစ်ကြေငြာခံရမယ့်အင်္ဂါရပ် Semalt ၏အပ်နှံထားသော SEO Dashboard အဆိုပါအစီရင်ခံစာများနှင့်မက်ထရစ် update လုပ်ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်ပျက်နေတယ်။
Semalt's DSD ကဲ့သို့အခြားမည်သည့်ကိရိယာမျှမမြန်ပါ။ မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမဆိုသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစီရင်ခံစာများတွင်အမြဲရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီအစီရင်ခံစာများ (အထူးသဖြင့်အထက်သို့တက်လျှင်) သည်၎င်းတို့အားရေရှည်တွင်ကျေနပ်မှုရှိစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
Semalt's Dedicated SEO Dashboard ၏သွင်ပြင် ၁၀ ခုရှိသည်။ အတူတူ၊ သူတို့သည်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးသင်၏ ဦး ဆောင်မှုနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုကူညီသည်။ လက်စွဲစာအုပ်အစီရင်ခံစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မက်ထရစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတိတ်ကိုရရန်အချိန်ရောက်ပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်မိသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလိုအလျောက်မှီခိုရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီး Semalt ၏ DSD သည်ယခုအခါကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ sign up!